ကယ်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – Shwe Canaan
September 3, 2012 Shwe Canaan Uncategorized, အမေးအဖြေ 0
၂၉၈။ သမ္မာကျမ်းသည် ထာဝရ စိတ်ချ လုံခြုံမူကို သွန် သင် ပါသလား?
ထာဝရစိတ်ချမူဟူသောစကားလုံးကို သမ္မာကျမ်း ထဲ၌မတွေ့ ရသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ထာဝရအသက်ကို တိကျစွာ သွန်သင်ပါသည်။သခင်ဘုရားက ယော၊၁၀း၂၈ ၌ “သူတို့သည်
ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက် မည် မဟုတ်”ဟုဆို၏။ သခင်ဘုရားသစ္စာရှိကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က သွန်သင်ဟန်ရှိသော ကြောင့် သခင်ဘုရားအပေါ်၌ ယုံကြည် စိတ်ချ ထားသောအခါရှင်ပေါလုနှင့်အတူ “အဘယ်သူကို ငါယုံကြည်သည်ကိုငါသိ၏။
သူ့ထံ၌အပ်ထားသမျှသောအရာတို့ကိုထိုနေ့တိုင်အောင် စောင့်နိုင်တော်မူ၏။ ငါသဘောကျလျက်ရှိ၏”
အကယ်၍သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရသောသူသည်ဤလုံခြုံစိတ်ချမူကို မယုံကြည်ပါက ၀မ်းမြောက်ခြင်းနှင့်
၂၉၉။ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟုထင်ပါသည်။ သို့သော် မည်သို့စိတ်ချနိုင်ပါမည်နည်း။
ယောဟန်သြ၀ါဒစာ ကထမစောင်ကိုဖတ်ပြီး “သိသည်” ဟူသောစကားလုံးကိုတွေ့ တိုင်းအဓိက ထားပြီးမှတ်သား ပါက သင့်အားများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည်။ သင်၏ ကယ်တင်ခြင်းမှာ ခရစ်တော်ပြီးစီးခဲ့သည့် အလုပ်အပေါ်၌ အမှီပြု ပြီး သင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း သို့မဟုတ်အတွေ့ အကြုံသို့မဟုတ် ခံစားချက်အပေါ်၌မတည်ပါ။ ခရစ်တော်ကပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်သွားပြီဟု လုံးလုံးယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်သည့် သူ၏ သစ္စာပင်ဖြစ်သည်။
၃၀၀။ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရကြောင်းသိပါသည်။ သို့သော်လူများတို့၏ သက်သေခံခြင်းကဲ့သို့ အချိန်ပေးနိုင်ပါ။ ဤအရာသည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ပါသလား?
ကယ်တင်ခြင်းရ သည့်အချိန် အတိအကျကို မသိသည့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများစွာရှိကြပါသည်။ အရေးကြီး သောအရာမှာ ကယ်တင်ခြင်းရကြောင်းယခုသိရန်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကိုပြန်လည်ပြောပြတတ်ရန်ဆန္ဒရှိသင့်ကြောင်း
ကျွန်ုပ်သဘောတူသော်လည်း မရှိမဖြစ်ဟုမယုံကြည်ပါ။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လူတိုင်း သည်တူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်းထဲ၌ ကြီးပြင်းလာသောသူများမဟုတ်ပါ။
၃၀၁။ ကယ်တင်ခြင်းမရသောသူများအတွက် ဆုတောင်းပေးသင့်ပါသလား။ သူတို့ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရန် ဘုရားသခင် သည် ကြိုတင်ခွဲခန့်ထားပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုတောင်းခြင်းမည်သို့ အဖြေရနိုင်မည်နည်း။
ရှေးမဆွကခွဲခန့် ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်သိထားခြင်း အပေါ်၌အခြေပြုပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်
သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအရာခပ်သိမ်းကို ကြိုတင်သိထားပြီး ထိုအတိုင်းစီ စဉ်ကြံ စည်ပါသည်။ ဤအရာသည်ဆုတောင်းခြင်း တန်ဖိုးကိုမပျက်စီးစေနိုင်။ အကြောင်းမှာ ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ အပိုင်းကိုသစ္စာရှိစွာ ကျွန်ုပ်တို့ပြုကြပါက ဘုရားသခင်သည် သူ၏ အပိုင်းကိုပြီးစီးစေမည်။စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
၃၀၂။ ကယ်တင်ခြင်းမရသောသူများသည် ချီဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်း၌ ကယ်တင်ခြင်းရရန်အခွင့် အရေးတစ်ခုရှိကြဦး
မည်လား ။ထိုသို့ဖြစ်ပါကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထွက် သွားပြီဖြစ် သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းကိုမည်သို့ရရှိ ကြမည်နည်း။ ဗျာဒိတ် ၇ အရဘေးဒဏ်ကြီး ကာလအတွင်းတွင် များစွာသောလူများ ကယ်တင်ခြင်းရကြမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့
ယုံကြည်သော်လည်း ယခုကာလ၌သခင် ဘုရားကိုငြင်းပယ်သောသူများသည် သခင်ဘုရားကြွ လာပြီးနောက် ပိုင်း၌ဒုတိယအခွင့်အရေးကိုမျှော်လင့်၍မရပါ။ ဧ၀ံဂေလိကိုငြင်းပယ်သော သူများအားအခြားသော အခွင့် အရေးပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းစွဲကိုင်လေ့ရှိပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိုချီ ဆောင်ခြင်း၌ခေါ်သွားပြီး နောက်ပိုင်းပင် တေကုတ္တေ မတိုင်မီ ဓမ္မဟောင်းကာလကဲ့ သို့လုပ်ဆောင် သွားမည်ဟု သိရပါသည်။ အသင်းတော်၌တည်ရှိခြင်း အားဖြင့် သူသည် အသင်းတော်နှင့်အတူချီ ဆောင်ခြင်းခံသော် လည်းမြေကြီးပေါ်၌ ယုံကြည်သူတစ်ဦးချင်းစီတွင် ဆက်လက်သက် ရောက်ဦး မည်ဖြစ်သည်။
၃၀၃။ ကျွန်တော်အမှန်တကယ် ဒုတိယမွေးခြင်းခံသည်ကို မည်သို့သိနိုင်ရမည်နည်း။
သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားခံစားလျက်လူ၏အထင် အမြင်နှင့်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ရှိသောအတွေးအခေါ်အပေါ်မူတည်မထားရန် ကျွန်ုပ်အကြံပေးပါရစေ။ အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ဂတိတော်အပေါ်၌ တည်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံး နှင့်အသက် တာများကိုကြည့်သော အခါ၌သံသယများစွာ ဖြစ်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဂတိတော် ကိုကြည့်သောအခါ၌သံသယမ ရှိနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ကျမ်းစာက “သခင်ဘုရား၏နာမ
တော်ကိုခေါ် သောသူတိုင်းတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်” ဟုဆို၏။ ထိုကတိတော် နှင့်မည်သည့်အရာမျှ ရှုပ်ထွေးမူမရှိကြောင်း သင်သတိထားမိပါလိမ့်မည်။ သူ၏နာမည်ကိုရိုးသား စွာခေါ်ပါကစိတ် ခံစားသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟု ဘုရားသခင်ပြောပါသည်။ တစ်ခါထပ်ပြောပါရစေ။ သင်၏ကယ်တင်ခြင်းသည်သင်၏ ထင်မြင်ချက်အပေါ်၌ မတည်ဘဲ သင်၏ယုံကြည်ခြင်း အရာအပေါ်၌တည်ပါသည်။ ကိုယ်တော်က“ ငါ့ထံသို့လာသောသူ ကိုငါအလျှင်း မပယ်”ဟုဆို၏။
၃၀၄။ သမ္မာကျမ်းက အိမ်လုံးကျွတ်ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းကို သွန်သင်ပါသလား။
တစ်မိသားစုလုံးကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တမန်တော် ၁၆း၃၁ ရှိတစ်အိမ်သား လုံးယုံကြည် သောဖိလိပ္ပိမြို့ ရှိထောင်မှုးကိုသတ်ိရပါ။ တအိမ်လုံးကယ်တင်ခြင်းရရန် တအိမ်သားလုံးယုံကြည်ရမည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရပြီး ကလေးများကယ်တင်ခြင်းအတွက် သခင်ဘုရားကို အပြည့်အ၀ယုံကြည်မည်ဆိုပါက သူသည်“ သူငယ်သွားရာလမ်းဝ၌ ဆုံးမ သွန်သင်လော့ဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ရမည်။
၃၀၅။ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီဟုကျွန်တော်သိပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ကြိမ်ဖန်များ စွာသံသယရှိပြီး ကယ်တင်ခြင်း ဆုံးရှုံးသည်ဟုခံစားမိပါသည်။ ဤအရာသည် ကျွန်တော်အမှန်တကယ် ကယ်တင်ခြင်း မရသေးခြင်းဖြစ်ပါသလား။
စာ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်၏စိတ်ခံစားချက်ကိုကျွန်ုပ်လွယ် ကူစွာနား လည်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်လည်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ သံသယရှိပါသည်။ သင်အံ့သြသွားပြီလား။ ကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ရှင်နှင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်၌ သံသယမရှိသော်လည်း De Haan ဟူသော သူကို ကျွန်ုပ်ခဏခဏ သံသယရှိပါသည်။ ဤပုဂ္ဂုလ်၏အထဲကို ကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါ အရာခပ်သိမ်းတို့မှောင်မိုက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်သူကိုကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါ အရာခပ်သိမ်း တောက်ပလျှက်ရှိပါသည်။ ကယ်တင်ရှင်ကိုသင်ကြည့်မည့်အစားသင်ကိုသင် ကြည့်မည်ကို စိုးရိမ်ပါသည်။ သင်၏စိတ်ခံစား ချက် ပြောင်းလဲပြီး ဘုရားသခင်၏ ဂတိတော်များသည် အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း
၃၀၆။ လူခပ်သိမ်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ်မွေးဖွါးလာကြပါသလား။
လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်သည် ဟူသောအချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍မွေး ဖွါးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများမဟုတ်ဘဲအမျက် တော်ကိုခံသောသူများနှင့် မာရ်နတ်သား သမီးများဖြစ်ကြသည်ဟုသမ္မာကျမ်းက တိကျစွာပြောပါသည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသစ်မွေးဖွါးခြင်းအားဖြင့် သာလျှင်လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်၏အစေခံ ကျွန်နှင့်သား သမီးဖြစ်နိုင်သည်။
၃၀၇။ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့လာရန် ဤအသက်တာသည်နောက်ကျနေပြီလား။
နောင်တရလျှက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံသို့လာရန်နောက်ကျနေပြီဟု ကျွန်ုပ် မယုံကြည်ပါ။ လူတစ်ယောက် သည် နောင်တမရနိုင် သုိ့မဟုတ်သခင် ဘုရားထံတော်သို့ မလာနိုင်ပါက ဤအကြောင်းအရာကို သတိရခံစားမည်မဟုတ်ပါ။ ၀ိညာဉ်ရေားရာ၌သေ သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်သောသူသည် သခင်ယေရှုထံ သို့လာရန်အဆင့်၌ ရှိသေးသည်။“ သခင်ဘုရား၏ နာမကိုခေါ်သောသူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။”
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါက “ ကိုယ်အပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျှင် ငါတို့အပြစ်များ ကိုလွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေ.. ၁ယော ၁း၉